Anyị enwere ike Biko gbuo echiche ụgha ndị a? | Martech Zone
Gbalịa ka m nwere ike ime kpochapu akụkọ ifo nke ilebara anya, ọ na-aga n'ihu na-achịkwa ụzọ ọtụtụ ngosipụta ahịa na isi okwu. Yabụ, mụ na onye ọrụ ibe m rụkọrọ ọrụ na Ablog sinima iji mepụta nke mbụ na usoro vidio ndị na-ewepụ akụkọ ifo na echiche na-ezighi ezi na ịntanetị well yana weta ụfọdụ iyi m n'ihu ọha.
Mee ka ederede blọgụ gị dị nkenke, mee ka vidiyo gị dị mkpụmkpụ, mee ka eserese gị dị mfe… ndepụta ndụmọdụ dị egwu na-aga n'ihu. Na anya na-adịkarị akụkọ ifo ọ bụghị naanị ndị ahịa na-agbasa, ọ bụkwa site na nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi, gụnyere Magazin oge, na Telegraph, na Guardian, USA Today, na New York Times, na Akwụkwọ Ozi Mba, Harvard na Redio US na akwụkwọ njikwa Brief. Ug.
Obi dị m ụtọ na otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi rụrụ ọrụ ahụ wee nyochaa akụkọ ifo na ụmụ mmadụ na-atụgharị uche na-ebelata… Ndị BBC. Onye edemede Simon Maybin kpọtụrụ ebe data sitere na data - National Center for Biotechnology Information na US National Library of Medicine, na Associated Press - ọ nweghịkwa ike chọta ndekọ ọ bụla nke nyocha nke na-akwado stats.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ọzọ dị ịtụnanya iron Simon chọpụtara nke ahụ azụ azụ n'ezie enwechaghị anya, ma!
Ọ bụ Banyere Nhọrọ!
Ugbu a, anyị bi n'ime ụwa ebe ihe niile na-achọ ma n'ụzọ nkịtị na mkpịsị aka anyị. Lee ụfọdụ ihe atụ:
SEO - Achọrọ m enyemaka maka ụtụtụ a n'ụfọdụ koodu m na-ede. M pịrị aka na nsonaazụ izizi na peeji nchọta nchọta ihe achọtaghị ihe m na-achọ. Emegharịrị m nyocha ahụ n'ụzọ ole na ole ma mesịa chọta ezigbo ozi m chọrọ. Nke ahụ ọ pụtara na oge m na-etinye uche m dị mkpụmkpụ n'ihi na m etinye obere oge na nyocha ọ bụla? Mba, ọ pụtara na ha abaghị uru ma m gara n’ihu na-achọ ihe ọmụma achọrọ m ruo mgbe m chọtara ya. Achọpụtara m na ọ dịtụghị, ihe ọ bụla gbadara ibu ọrụ from mana nhọrọ ndị a mere.
Ose na Vidiyo - Enwere m mmasị ige pọdkastị na ikiri vidiyo, mana enweghị m ndidi maka ịsụ ọbara ma ọ bụ ịkwalite ndị na-ekwu okwu onwe ha. M ga-ege nti ma obu na ekiri vidiyo mgbe niile… rue mgbe m rutere nsonaazụ ebe ogo na mmeputa na-enye m ihe m choro. Na mgbe ahụ enwere m ike ịge ntị ruo ọtụtụ awa ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ bụ ihe ọmụma ma na-atọ ụtọ. Anyị na-ebi n'ụwa nke ịlele binge-na-achọ vidiyo… folks, ọ dịghị nlebara anya gbasara nsogbu na ngwụcha izu nke ocheeze!
AJ na-arụ nnukwu ọrụ ọbụlagodi ịkekọrịta vidiyo ebe ndị na-ege ntị nọ n’agbata afọ itoolu na afọ iri na ise! Maka akụkọ ntolite niile, ndị na - eto eto ochie na-agba mgba na ndị na - eto eto ị attentiona ntị… na ndị Youtubers a nwere ike nweta ọtụtụ ijeri echiche maka vidiyo nke na - adịgide karịa otu awa
Ihe ntorobịa anyị nwere nke anyị na-enweghị bụ nhọrọ na mma.
Ya mere, Gịnị Ka Nke ahụ Pụtara Maka Ndị Ahịa?
M ga-agba ndị na-ere ahịa aka ka ha kwaga n'akụkụ ọzọ. Nye isiokwu miri emi, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ, ndụmọdụ enyemaka, infographics, vidiyo, na pọdkastị nke miri emi banye isiokwu ndị masịrị ndị na-ege gị ntị. Anyị na-aga n'ihu
Ọ bụla ahịa na anyị ịzụlite a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya n'ihi na mmiri ndị a miri emi na-ewetara ha nsonazụ dị ịtụnanya. Chọpụta… ụfọdụ adịghị mkpa ọbịa i scanomi ma na-ahapụ ... ma atụmanya ndị na-achọ ihe ọmụma na ọnụnọ, eripịa, òkè, na-ekere òkè na ozi nyere. Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeri na ọdịnaya, kwụsị imepụta iyi na-enweghị ngwụcha nke ọdịnaya junk ma nye ọdịnaya dị elu, ihe mmụta dị elu nke ndị na-ege gị ntị na-achọ!
Tags: anya na-adịkarị akụkọ ifoVidio Ahịamme ukwan̄ ekikere